Global Voices teny Malagasy » Manao Fitsapankevi-bahoaka Voalotonà Tsy Fanarahan-dalàna Maro i Azerbaijan. Misy Mba Miraharaha Ihany Ve? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2016 17:33 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika Tantely
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Fandikàna ny sainam-pirenena Azerbaijani. Sarin'ny Pixabay nahazoana lisansa azo averina ampiasaina.
Tsy maintsy mandeha an-dakilasy ireo ankizy lehibe taorian'ny fahaleovantenan'i Azerbaijan, ao amin'ilay firenena manankarena solika ahitàna lalàmpanorenana  misy fiovàna hatrany, fa matetika toa maka endrika tsianjery ireo lesona ao anaty fiaketana, miaraka amin'ny famakiana mitsikera sy adihevitra mampivalaketraka.
Mety hoe izany no antony hoe farafahakeliny 70%-n'ireo Azerbaijani mpifidy tamin'ny fitsapankevi-bahoaka ny 26 Septambra no hita ho nanohana tanteraka ireo fanovàna 29 amin'ny lalàm-panorenana izay manome fahefàna bebe kokoa ny fitondran'ny Filoha ankehitriny Ilham Aliyev mety hampitombo indray ny fe-potoam-piasàn'ireo filoha amperinasa ho fito taona raha toa ka tokony ho dimy.
Na, mety misy antony hafa, afenafenina amin'izany fanekena manetriketriky ny fianakaviana mpanao kolikoly eo amin'ny fitondrana izany, sy ny fanandraman'izy ireo ny hanova ny rafitra politikan'i Azerbaijan mba hifanaraka amin'ireo filàny ho amin'ny fitondràna fanintelony nanomboka tamin'ny taona 2002?
Hosoka, hosoka ary hosoka hatrany
Ohatra iray amin'ny vatom-pifidianana i to alefa amin'ny rohy ito. Ny lahatsoratry ny fanovàna natolotra monja no zara rahahitan'ireo mpifidy tao amin'io singan-taratasy io ny 26 Septambra. Tsy misy filazana ny lohatenin'ny lalàna hasiam-panovàna mihitsy, na ilay lalàna tsotra izao.
Ankoatra izay, na iray aza tsy nisy nohazavaina am-pahibemaso tamin'ireo mpifidy ireo fanovàna. Taminà tafatafa nataon'ny sampana Azerbaijan an'ny Radio Free Europe, niaiky ny ankamaroan'ireo mpamaly fa tsy nahalala ny ho vokatr'ireo fanovàna vaovao.
Nifototra tamin'ireo fandinihana teny an-kianja nataon'ireo media mahaleotena, toy ny RFE sy ny Fahitalavitra Meydan, hatramin'ireo olon-tsotra mpanao gazety, mazava be fa nisy tokoa ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifidianana ary mety lehibe tsy mbola nisy ohatra izany mihitsy.
Ireto vehivavy roa  ireto ohatra, azo sary amin'ny lahatsarin'ny RFE, tratra nifidy in-droa tamin'ny biraom-pifidianana samihafa.
Eto ambany, amin'ny lahatsary nalefa tao amin'ny fansona YouTube an'ny Fahitalavitra Meydan, aseho mampiditra am-pifaliana biletà maro ao amin'ny vata fandatsaham-bato ny mpikambana iray amin'ny kaomitim-pifidianana.
Ary eto, apetraka ambony latabatra ny vata fandatsaham-bato feno biletà.
Miaraka amin'izany, feno tatitra mahaliana mikasika ny fitaterana mpifidy ary ireo fanavaozana teo ambany tenifototra #AzReferendum  ny media sosialy
Mpifidy mpanodinkodina vato eo am-perinasa #AzReferendum
Zavatra iray raha toa ianao manao fihetsika tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra tokony ho izy amin'ny maha-ianao anao. Zavatra hafa mihitsy indray raha toa ianao manao izany amin'ny maha-olom-pirenena. Toy ireo nanitrika vatom-pifidianana maro omaly #AzReferendum
Olom-pirenena malaza, mpitoraka blaogy, Hebib Muntezir, nanazava tamin'ireo mpanaraka azy taminà torolàlana iray “ahoana” ny fanaovana hosoka amin'ny fitsapankevi-bahoaka Azerbaijani :
Ireo teknolojian'ny fifidianan'ireo yapokrats [ireo avy ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ao Azerbaijan Vaovao] amin'ity fitsapankevi-bahoaka ity #ballotstuffing #AzReferendum:
1. Fitaterana mpifidy — rehefa misy vondron'olona iray mandehandeha amin'ny toeram-pifidianana iray ka mankany amin'ny iray hafa [mba hifidy imbetsaka], indraindray miova akanjo vaovao mba tsy ho tsikaritra;
2. #fanitrihana_vatompifidianana — aorian'ny fanasisihana vatom-pifidianana maro anaty vata fandatsahambato, maka io ka manontsankontsana azy ny mpikambana iray amin'ny kaomitim-pifidianana mba hanafangaroana ny porofo;
3. Mifidy ho an'ireo ray aman-dreniny tsy tonga eo ireo mpifidy (tsy mitondra taratasy ofisialy manome alalana ilay olona hanao izany);
4. Atao amin'ny anaran'ny olona iray marary tsy afaka tonga any amin'ny toeram-pifidianana ny latsabato (eto indray koa, mbola tsy misy taratasy ofisialy manome alalana ilay olona hanao izany);
5. Tolorana taratasy voasonia mialoha ary mameno ireo vata fandatsahambato mba hifidy Eny ireo mpiasan'ny sampan-draharahan'ny governemanta;
6. Soloina vata fandatsahambato feno efa nampiandrasina tany an'efitra [ambadika tany] ireo mbola tsy misy na inona na inona tany amin'ireo fari-pifidianana;
7. Tsy misy fanakontakonana toy ny nitranga tany amin'ireo taona lasa intsony — anaovana hosoka mivandravandra be, manoloana ireo fakantsary, ireo fifidianana;
8. Hafatra ho an'i Eorôpa ilay 69% tahan'ny fandraisana anjaran'ny mpifidy. Tongava dia jereo ny fandehan'ireo fifidianana ary mianara aminay.
Hatezerana amin'ilay fitaovana
Fa tamin'ny andro izay nampandeha nilamina ny fitondrana, mbola nisy tranganà hetsi-panoherana kely ihany teny an-tsefatsefany teny, milaza fa tsy mbola tapaka tanteraka akory ny fanoheran'ny fiarahamonina Azerbaijani.
Olom-pirenena maro no naka ny sarin'ireo biletà nosokafana misy teny faneva ara-politika:
Adabohy ny fanjakan'olontokana !
#boycott Aza aolana ny lalàm-panorenana. Adabohy ny fanjakan'olontokana!
Mitady firenena hitsoahana ireo tanora. Fa ho tonga ny fotoana tsy hahita lavaka hanitrihana an'i Heydar kely [mantsy ilay zanaka lahin'i Ilham Aliyev] intsony ianareo.
Vokatr'ireo fanovàna lany, Aliyev, izay nandray ny fitondrana taorian'ny nahafatesan'ny rainy Heydar Aliyev ny taona 2003, dia hiatrika ny fifidianana manaraka hatao ny taona 2020, raha toa ka tokony ho amin'ny taona 2018.
Amin'izany fotoana izany, tsy misy fisalasalàna izy momba ny fahazoan'ny toekaren'ny firenena izay mikororosy — voavelivelin'ny fitontonganan'ny vidin'ny solika manerantany — tanjaka vaovao indray.
Fanovàna iray hafa mendrika ny homarihana ny fampidinana ny taona farany ambany takiana amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka ary ny taona farany ambany takiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, izay 25 ka lasa 18 taona.
Ireo fanovàna ireo dia toa hita ho manome tombony ny zanakalahin'i Ilham, Heydar, 19 taona, izay nomena ny anaran'ny raibeny ary voalaza  ho manana tranobe sivy eny amoron-drano any Dubai tao anatin'ny fijoroana vavolombelona momba ny fananan'ny fianakaviana eo amin'ny fitondràna.
Miaraka amin'ny fanamafisana ny fanaovana an-kilabao ireo feo mpitsikera, toa hita ho zara raha misy azon'ireo olon-tsotra atao handakàna hiverina ilay hany fifandovan'ny fianakaviana mpanao jadon'ny Firaisana Sovietika teo aloha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/01/89511/
 amin'ny vatom-pifidianana i: http://www.msk.gov.az/uploads/Referendum2016/bulleten.jpg
 Ireto vehivavy roa: https://youtu.be/YMgFLXksJgQ